शिल्पीमा उदाए भानुभक्त - Naya Patrika
शिल्पीमा उदाए भानुभक्त
काठमाडौं, ११ मंसिर | मङि्सर ११, २०७४
मञ्चको बायाँतिर भानुभक्त र दायाँतिर घाँसीको सालिक छ । सालिकमा माल्यार्पण गर्नेको घुइँचो छ । तर, माल्यार्पण भानुको सालिकमा मात्र हुन्छ । घाँसीको सालिक उदास छ । न गलामा फूलको माला छ, न अनुहार फूलजस्तै हाँसेको छ ।
तर, एकाएक एकजना शुभेच्छुकको प्रवेश हुन्छ । उसले भानुलाई पनि र घाँसीलाई पनि माला लगाइदिन्छ । तर, घाँसीको परिचय के हो ? किन घाँसीको नाम, थर र ठेगानाको कतै उल्लेख छैन ? एउटा गम्भीर प्रश्न छाडेर जान्छ, ऊ ।
आरम्भ कलाकारहरूको समूहको प्रस्तुति नाटक ‘रात चिन्र्या भानु’ शिल्पी थिएटर बत्तीसपुलतीमा यसरी नै सुरु हुन्छ । तर, नाटक घाँसीको होइन, भानुको जीवनयात्रामा केन्द्रित छ ।
नाटकको सुरुवातमा बाल्यकालको भानुलाई देखाइएको छ । उसको शिक्षादीक्षा हजुरबुबाबाट हुन्छ । हजुरबुबासँगै लागेर पढ्नका लागि काशी जान्छ ।
त्यसपछि भानु जवान हुन्छ । ऊ पढेर गाउँ चुँदीरम्घा फर्कन्छ । उसको पुराण वाचनशैलीले गाउँमा ठूलै चर्चा पाइसकेको हुन्छ । त्यो कुरा घाँसीसँगको भेटबाट खुल्छ । अनि घाँसीकै आग्रहमा उसले रामायणलाई नेपालीमा उल्था गर्न थाल्छ ।
त्यसपछि भानु जेल पर्छ । जेल कसरी पर्छ, कसरी छुट्छ र फेरि कसरी चुँदीरम्घा नै फर्कन्छ भन्ने कुरा नाटकमा राम्रोसँग बुनिएको छ । नाटकमा उसको मृत्युलाई समेत देखाइएको छ । अर्थात् भानुको समग्र जीवन देखाउने प्रयास गरिएको छ ।
अन्त्यमा आएको शुभेच्छुकलाई भने फेरि पनि भानुभन्दा उसको प्रेरणाको स्रोत घाँसीकै चिन्ता लाग्छ । तर, उसले घाँसी हुनु नै उसको परिचय भएको स्विकार्छ । अर्थात् श्रमको, सम्मानको र गुरुको कुनै नाम हुन्न । घाँसी श्रमको प्रतीक हो, शिक्षादाता हो र समाजसेवी हो भन्ने शुभेच्छुकले ठान्छ ।
नाटकमा चिबे पात्रलाई हास्यरसमा उतारिएको छ । उसले दर्शकलाई चनाखो बनाइराख्छ । कोरसले पनि नाटकमा सन्देश दिएका छन् ।
नाटकका लेखक तथा निर्देशक प्रभाकर पण्डितले भानुको जीवनका केही प्रेरणादायी र महत्वपूर्ण अंशलाई नाट्य रूपान्तरण गरेको बताए । भानुका जीवनको तीन कालखण्डलाई नाटकमा समेट्ने प्रयास गरेको उनको भनाइ छ ।
नाटकमा प्रकेश सिन्धुलीय भानुभक्तको भूमिकामा छन् । त्यस्तै, साक्षी लम्साल भानुकी श्रीमती चन्द्रकला, प्रेम पौडेल शुभचिन्तक, रमेश दाहाल हजुरबुबा श्रीकृष्ण र प्रह्लाद खरेल चिबेको भूमिकामा छन् । नाटकमा चाँदनी शाही, बासुदेव खनाल, राधा श्रेष्ठ, मानष राज, पुष्पराज अवस्थीलगायत कलाकारको अभिनय छ । नाटक १६ मंसिरसम्म मञ्चन हुनेछ ।